Youth&Politics (Batch-11) - The Fifth Pillar
The Fifth Pillar has organized and conducted another training in the title “Youth&Politics” with 21 enthusiastic young participants from different backgrounds. The training was held just in the head office hall, Yangon on 8 of July 2017 ( Saturday), taken 8 hours from 9:00am-5:00pm and facilitated by Mr. Nay Win Naing, trainer and programs director of TFP. The training has reached to batch-11 now. In addition, the topics delivered in the training were as follows.
Studying the political context of Myanmar
Authoritarianism and Democratic Government
State, Government and Sovereignty
Three pillars in 2008 constitution
Description for 2008 constitution amendment
The Fifth Pillar conducts training once in two weeks and the up coming training (batch-12) is going to be on 22 of July 2017. For up to date information and training announcement, check this website or follow The Fifth Pillar Facebook Page https://www.facebook.com/TheFifthPillar.tfp/ .
“လူငယ်နှင့် နိုင်ငံရေး” သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၁) ကို ယနေ့ ဝါဆိုလပြည့်နေ့၊ (၈-၇-၂၀၁၇) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအမှတ်စဉ်(၁၁)တွင် မတူညီသည့် နယ်ပယ်အသီးသီးမှ လူငယ်(၂၁)ဦးကို ရွေးချယ်ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်တန်းကို နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၅:၀၀) ထိ (၈) နာရီကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုအပတ်စဉ် (၁၁) သင်တန်းတွင်-
▪️ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းများကို လေ့လာခြင်း
▪️ အာဏာရှင်စနစ်နှင့် ဒီမိုကရေစီအစိုးရ
▪️ “နိုင်ငံတော်”၊ “အစိုးရ” နှင့် “အချုပ်အခြာအာဏာ”
▪️ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအရ မဏ္ဍိုင်ကြီး (၃) ရပ် ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာပုံ အဆင့်ဆင့်နှင့်
▪️ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ
စသည့် ခေါင်းစဉ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
The Fifth Pillar မှ “လူငယ်နှင့် နိုင်ငံရေး” သင်တန်းကို (၂) ပတ်တစ်ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပြီး လာမည့် (၂၂.၇.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်လည်း အမှတ်စဉ်(၁၂) ကို ဖွင့်လှစ်ရန် လျှာထားချက်ရှိပါသည်။
⭕️ အပြောင်းအလဲကို လူတိုင်းလိုလားကြပါတယ်
⭕️ ဒါဆို ဘာကြောင့် ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က စပြီး မပြောင်းလဲနိုင်ရမှာလဲ?
⭕️ တကယ်တော့ အပြောင်းအလဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင် စတင်ပြောင်းလဲမှ တခြားအရာတွေကို အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသွားအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
← Youth&Politics (Batch-4)
Youth&Politics Training (Batch-8) →
COVID-19 Prevention Masks Donation
လူငယ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိသင်တန်း (အမှတ်စဥ်-၂)